CHANEL Caviar Chain Shoulder Bag Shopping Tote Black Quilted c07 – hannari-shop
An authentic CHANEL Caviar Chain Shoulder Bag Shopping Tote Black Quilted c07 This item is Contemporary. The year of manufacture would be 2002.
အပြင်ဘက်တွင်ပစ္စည်းများ: Caviar သားရေ
ပိတ်သိမ်း - ဇစ်
ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ကွင်းဆက် - Gold-Tone
Serial #: 7764662 (စတစ်ကာနှင့်ကဒ်ရှိတူညီသောနံပါတ်။ )
စစ်မှန်သောကဒ်၊ ဖုန်အိတ်၊ စောင့်ရှောက်မှုစာအုပ်ငယ်နှင့်အတူပါရှိသည်
ယေဘုယျအားဖြင့်: 8 of 10 - အပြင်ဘက်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုမှုနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိသည်။ မှတ်သားလောက်သောခြစ်, scuff အမှတ်အသားများသို့မဟုတ်အစွန်းအထင်းမရှိပါ။ အတွင်းပိုင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအလွန်သန့်ရှင်းသည်။ စေးကပ်ခြင်းနှင့်အခွံမရှိပါ။ ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအားလုံးသည်တောက်ပပြီးအလွန်ကောင်းသည်။ ဖုန်အိတ်လည်းကြီးပါတယ် အထူးအကြံပြုလိုတယ်!
ခန့်မှန်းခြေ အရွယ်အစား: H7.4 "x W9.8" x D5.1 "(H19 x W25 x D13 စင်တီမီတာ)
ခန့်မှန်းခြေ သိုင်းကြိုးတစ်ချောင်း: 8.2 "(21 စင်တီမီတာ)